Gearheads boaty reducer haingam-pandeha ho lafo amidy Industrial
Boaty fanodinam-pandeha haingam-pandeha hamidy indostrialy mora vidy
Manolotra boaty haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta izahay.
Gearbox Reducer haingam-pandeha avo lenta
Misy safidy marobe amin'ny boaty gearbox sy reducer hafainganana ho an'ny fampiharana marobe izay mitaky tsela avo sy hafainganam-pandeha miadana. Ny reducers hafainganam-pandehanay rehetra dia manana kalitao sy hery lehibe. Raiso ny tolotra tsara indrindra amin'ny Gearboxes Industrial & Speed ​​Reducers.
Ary ny Gearbox Haingam-pandeha?
Ny reducers an'ny kankana, misy amin'ny kapila mivantana na ankolaka, dia ampiasaina amin'ny fampiharana soavaly soavaly ambany sy antonony mba hampihenana ny hafainganana sy hampiakarana tsela. Azo alaina amin'ny zoro havanana, fampitoviana ary fivoahan'ny fitambarana. misy fihenam-bidy kankana mihena telo heny amin'ny tahan'ny 5000: 1 ka hatramin'ny 175000: 1 ary ny afovoany 7 "ka hatramin'ny 20". na fitaovam-piadiana planeta marobe.Ny gearmotors sy ny reducers antsika amin'ny zoro ankavanana dia misy fiasa manara-penitra mahomby. Mitadiava boaty fihenam-bidy enti-miasa, reducers gearbelt, reducers hafainganam-pandeha baldor ary maro hafa amin'ny lafiny hafa.
Inona no tanjona amin'ny fampiasana boaty fanodinana Speed ​​reducer?
Raha ampitahaina amin'ny Reducer haingam-pandeha haingam-pandeha, ny boaty haingam-pandeha haingam-pandeha dia ampiasaina hampihenana ny hafainganan'ny fidirana, avy amin'ny motera na ny mpamily sasany, ary koa ny fampitomboana ny tavy ny sanda fidirana amin'ny vatan'ny output reducer hafainganam-pandeha na ny mekanika entina Manamboatra karazana samihafa izahay ny reducers hafainganam-pandeha, natao hampitomboana ny tselika ary hampihena ny hafainganan'ny motera elektrika anao. Manome vokatra avo lenta sy ambany. Rehefa manamboatra reducer hafainganana, na inona na inona fampiharana. Raha atao teny hafa, ny reducer gear dia mampitombo ny tselatra ary mampihena ny hafainganan'ny motera. Ny reducer shaft hollow dia manome ny lavaka afovoany miaraka amina famolavolana karazana singa ho an'ny famolavolana rafitra sy ny safidy fitehirizana habaka. Tadiavo mora foana ny fiara mifono motera elektrika eo amin'ireo vokatra 45 avy amin'ny marika malaza any Sina.
Rindrambaiko sasantsasany ho an'ny boaty fanodinana haingam-pandeha.
Gearbox haingam-pandeha haingam-pandeha
Fanovozan-kevitra ho an'ny vokatra famindrana herinaratra bebe kokoa
Raha te-hahita tolotra tsara indrindra amin'ny boaty fanodinana Speed ​​reducer ianao
Miandry anao izahay eto.
Ny Motorantsika dia manamboatra karazana helical sy karazana kankana fanodinana fitaovana (gearboxes) ho an'ny maotera. Vonona ary manantena ny fiaraha-miasa izahay. Raisinay ho kalitao ny tombony ary ny vidiny ambany indrindra amin'ny fahatsoram-po.
Aza misalasala mifandray aminay ary eto manaraka ny contact anay. Hamaly anao faran'izay haingana izahay!
E-mail: [email voaaro] Skype ID: qingdao411